Iindaba -Izinto ezintsha- IBhodi yoqalo eqingqiweyo
Uqalo olucekethekileyo kukhulula umbhobho wokuqala woqalo ngaphandle kweentanda ngokuthambisa nokulungisa umbhobho woqalo kwishiti yoqalo, ukuze wandise ukusetyenziswa kwezinto zoqalo.
Imveliso yoqalo isicaba yinto yeplate yendalo, ke inokusetyenziselwa ukutyibilika ngoqalo, iibhodi zokusika uqalo, iplanga ngamaplanga, uqalo, ifanitshala yezandla kunye nezinye iimveliso, ezinemarike ebanzi.
Kuba yonke into yoqalo sisiqwenga sebhodi yoqalo, iglu ayisasetyenziselwa ukwandisa imitya yoqalo. Ngale ndlela, ukunxibelelana ngokuthe ngqo phakathi kweearhente zemichiza (izinto zokuncamathelisa) kunye nokutya kuthintelwe ukukusebenzisa kwibhodi yokusika, okuphucula ukhuseleko lokutya.
Itekhnoloji ethe tyaba yombhobho eluhlaza woqalo iwuphucule kakhulu umyinge wokusetyenziswa xa kuthelekiswa nobuchwephesha bokulungisa uqalo. Ngenxa yokuncitshiswa kakhulu kwezinto ezisetyenziswayo, indleko zeemveliso zoqalo ezinokuncitshiswa, ukuze isityalo esinobuhlobo sendalo semos bamboo sithathe indawo yokhuni kunye nentsimbi ngokubanzi. uqalo lokuphumelela iinkuni ".
Ixesha Post: Jun-22-2021